hyaluronic acid skin repair anti allergic cuticle repair acne treatment soothing moisturizing face serum oem - နှုတ်ခမ်း | မျက်စိ Cream| facial မျက်နှာဖုံး |L ကို Otion | facial Cream | မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ OEM / လိမ္မော်ရောင်, လက်ကားအရောင်း
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » hyaluronic acid skin repair anti allergic cuticle repair acne treatment soothing moisturizing face serum oem
ဣတ္ Intimate Gel
ယောနိသည် OEM စောင့်ရှောက်မှုအတွက် moisturzer ကိုအသားအရေအားကြည်လင်တောက်ပစေသည်
အမျိုးသမီးအသုံးပြုမှုများအတွက်ကျော်အနှစ်သာရ Antibacterial စျေးကြီးသော Gel ကို Safe,အမျိုးသမီးအရည်မမြင်နိုင်သောကွန်ဒုံး
Highly active water inastrict process
The ingredients are extracted and then frozen intoapowder atanegative temperature of 40-60 degrees Celsius while the rubber cap is sucked onto the ampoule under negative pressure.
Repair, acne treatment, Anti-အိုမင်း, whitening, all features have epidermal repair function.
Apply to sensitive skin epidermis, reduce redness, acne, acne, dark spots and can be used at any age.
ထုတ်ကုန်အမည်: Hyaluronic acid face serum Form: liquid and solid
Main ingredient: Hyaluronic acid, glucose, glycerin MOQ: 10000 pcs
မူလအစရာ: ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်နိုင်ငံ Use: Neck, Face
အင်္ဂါရပ်များ: Acne scar treatment, repair, soothing Net weight:apair of 6ml
မော်ဒယ်နံပါတ်: J-XH supply အမျိုးအစား: OEM / လိမ္မော်ရောင်
လက်မှတ်ပေးခြင်း: GMP, ISO ကို လက္ခဏာ: အာဟာရဖြစ်စေသော, Skin Revitalizer, moisturizer, Acne Treatment
Supply နိုင်ခြင်း: 50000 Pair/Pairs per Day ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် Carton
ဆိပ်ကမ်း Foshan Port Guangzhou Port ကြာမြင့်ချိန် : Within 15 days after paying 30% deposit
Other Freeze-dried powder：
Form ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်အပေါ်အခြေခံထားတယ် ” ဘေးကင်း,ပိုပြီးပြုပြင်,more moisturizing”quality pursuit andahighly responsible attitude to the user and using 100 % မူရင်းဂေဟစနစ်ပစ္စည်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်, ကုန်ကြမ်းပုံသေနည်း, အရည်အသွေးအစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု, beauty repair effect and other aspects of systematic research checks in order to improve the product’s technical content and beauty repair efficacy.
1.မေး: ကျနော်တို့ OEM မိန့်လိုပါက, အမိန့်အရေအတွက်အပေါ်မည်သည့်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်(MOQ)?
တစ်ဦးက:အဆိုပါ MOQ အကြီးအကျယ်သင်ရွေးချယ်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်. မည်သို့ပင်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား, ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသင်၏လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်ပူဇော်.
တစ်ဦးက: ကျနော်တို့က ISO ပေးနိုငျ, GMPC လက်မှတ်များ. ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. အခြားအလက်မှတ်များ(ထိုကဲ့သို့သော FDA ကအဖြစ်, SGS,EC), လိုအပ်လျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကငျြ့သုံးနိုငျ, ဒါပေမယ့်တချို့စွဲချက်ကျခံရလိမ့်မည်.
3.မေး: ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် packages များပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရှိနိုင်ပါသည်?
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့. သငျသညျပြီးသားသင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပါလျှင်,you can send us the stickers or provide your design so we can print it on the packages.(MOQ တစ်ခုချင်းစီကိုအထုပ်အဘို့ရှိပါတယ်).
4.မေး: အဆိုပါပေးပို့အချိန်ဆိုတာဘာလဲ ?
တစ်ဦးက: အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့် 15 ~ 30 ရက်, detail delivery date should be
တစ်ဦးက: ကျနော်တို့အမြန်ခြင်းဖြင့်တင်ပို့မည်. ထိုသို့သော FedEx အဖြစ်, DHL, TNT etc.(လေကြောင်းခရီးဖြင့်သို့မဟုတ်ပင်လယ်နားမှာက)
သဘာဝ whitening မျက်နှာဆန့်ကျင်ရှုံ့အသားအရေစောင့်ရှောက်မှုသွေးရည်ကြည်လက္ကား
High Quality ဆန့်ကျင်မျက်နှာပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်တပ်ရန်အဘို့အ Whiten ရွှေ Serum အိုမင်း
Foshan Forme ဇီဝနည်းပညာ Co. , Ltd © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုအသုံးအနှုန်းများနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ
Adress: ဒစ်ဂျစ်တယ်ရင်းမြစ်အီလက်ထရောနစ်, အဘယ်သူမျှမ. 17 Taoyuan အရှေ့လမ်းမကြီး, Songxia စက်မှုဇုန်, Songgang, Nanhai ခရိုင်, Foshan စီးတီး
ဖုန်းနံပါတ်: +86 13928266189
ထိထိရောက်ရောက် whiten ဖို့ဘယ်လို?
OEM / ODM မုန်လာဥမုန့်
Lyophilized Powder ၏ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း?